Warshadda Beeraha | Soo -saareyaasha Beeraha Shiinaha, Alaab -qeybiyeyaasha
Sahayda warshadda alfa-Chloralose CAS 15879-93-3 oo leh qiimo wanaagsan
Xirxirida: 1kg, 25kg bac ama sida codsi
alfa-Chloralose waa budo kristaliin ah oo ku milmi kara biyaha, si cadaalad ahna ugu milmi kara aalkolada, diethyl ether, glacial acetic acid, si yar ku milmi kara chloroform, ficil ahaan aan ku milmin batroolka ether.
alfa-Chloralose waxaa soo saaray falcelinta gulukooska oo leh koloral biyo la'aan ah oo kuleyl leh.
Tayo Wanaagsan & Bixinta Degdegga ah
Kinetin, oo markii hore loo maleeyay inay tahay waxsoosaarka dardaaranka, ayaa lagu go'doomiyey sidii hormoonka dhirta ama cytokinin. Cytokinins waxay u shaqaysaa sidii hormoonno koritaan oo muhiim ah oo saamayn ku yeelan kara koritaanka unugyada iyo kala -soocidda unugyada iyo unugyada aan beernayn. Kinetin waxaa laga helaa soosaarka unugyada dhirta, oo ay ku jiraan nodules xidid geedka iyo dareeraha endosperm ee miro qumbaha oo cusub.
Dhirta dhirta Mesosulfuron-methyl CAS 208465-21-8
Mesosulfuron-methyl waa sulfonylurea herbicide, kaas oo loo isticmaalo xakamaynta ryegrass ee sarreenka iyo haramaha ballaadhan ee badarka kale.
Molluscicide Metaldehyde CAS 108-62-3 Dila Masaska
Metaldehyde waa molluscicide loo isticmaalo dalagyo kala duwan oo khudradda iyo qurxinta beerta ama aqalka dhirta lagu koriyo ah, geedaha miro -dhalinta, dhirta yar -yar, ama geedaha avokado ama liinta, dhirta berry, iyo dhirta mooska. Metaldehyde waxaa loo isticmaalaa in lagu soo jiito oo lagu dilo slugs iyo snails.
Bacillus megaterium waa bakteeriyo kor u qaadeysa cytokinin oo loo isticmaalo kor u qaadidda xididka geedka. Codsiyada suurtagalka ah ee Bacillus megaterium waxaa lagu baarayaa lamadegaanka si kor loogu qaado beeraha lamadegaanka Köberl iyo kuwa kale. Waa garaam-togan, qaabeeya ul, bakteeriya samaysa. Waxaa loo adeegsadaa biocontrol -ka cudurada dhirta.
Dila Ayaxa Metarhizium Anisopliae Powder
Metarhizium anisopliae waa fungus si dabiici ah ugu koraa carrada adduunka oo dhan wuxuuna ku keenaa cudur cayayaan kala duwan isagoo u dhaqma sida dulin; waxay sidaas iska leedahay fangaska entomopathogenic. Waxaa la og yahay in uu qaadsiiyo in ka badan 200 oo nooc oo cayayaan ah, oo ay ku jiraan mooska. Waxaa hadda loo isticmaalaa sida cayayaanka bayoolojiga ah si loo xakameeyo tiro ka mid ah cayayaanka sida ayaxa, ayaxa, mooska, diqqa, iwm.
Hagaajinta Nitrogen Azotobacter budada chroococcum
Azotobacter chroococcum waa bakteeriya awood u leh inay hagaajiso nitrogen -ka hawada. Waxay ahayd aerobic-kii ugu horreeyey, hagaajiye nitrogen-noole ah oo la ogaaday. A. chroococcum wuxuu waxtar u yeelan karaa hagaajinta nitrogen ee dalagyada sida biofertilizer, fungicide, iyo tilmaame nafaqo, iyo bioremediation.
Biofertilizer Actinomycetes Powder ama Liquid
Actinomycetes waa hal noole oo kale oo soo saara dheef -shiid kiimikaad cusub. Kuwani waxaa laga heli karaa deegaanno kala duwan sida, biyaha macaan, ciidda, compost iyo deegaanka badda. Actinomycetes waxay guud ahaan soo saaraan antibiyootiko kala duwan oo leh shaqo u gaar ah kana firfircoon bakteeriyada iyo fangaska kala duwan.
Nafleyda Inoculants Streptomyces Microflavus Powder
Streptomyces microflavus waa nooc bakteeriya ah oo ka soo jeeda cirifka Streptomyces oo laga soocay carrada. Waa jiil cusub oo actinomyces ah, wuxuu dhirta ka dhigi karaa mid u adkaysata cudur, qabow iyo abaar, wuxuu hagaajiyaa difaaca dhirta; Waxay kor u qaadeysaa bakteeriyada, waxay kor u qaadi kartaa biqilka dhirta, xididdada horumaray, caleemo xoog leh, udugga miraha, iwm.
Bacillus Laterosporus Bacriminta Dabiiciga ah Qaboojiyaha Wax -ka -beddelka Ciidda Wax -ka -beddelka Dhirta Dhir -dillaaca Dabiiciga ah Wuxuu dhiirrigeliyaa helitaanka fosfooraska ciidda. Wuxuu yareeyaa dhaawaca dalagga isagoo kor u qaadaya tilmaamaha milixda ciidda.
Paenibacillus polymyxa, oo sidoo kale loo yaqaan Bacillus polymyxa, waa bakteeriya-gram-positive oo awood u leh hagaajinta nitrogen. Waxaa laga helaa ciidda, unugyada dhirta, meelaha badda ku jira iyo ilaha kulul. Waxaa laga yaabaa inay door ku yeelato hab -nololeedka kaymaha iyo codsiyada mustaqbalka ee suuragalka ah sida biofertilizer iyo wakiilka biocontrol ee beeraha.
Xakamaynta noolaha Trichoderma Reesei Powder
Trichoderma reesei waa fangas mesophilic iyo filamentous. Waa anamorph of fungus Hypocrea jecorina. T. reesei wuxuu qarin karaa xaddi badan oo ah enzymes cellulolytic. Cellulase microbial -ku waxay leeyihiin codsi warshadeed si loogu beddelo cellulose, oo ah qayb weyn oo noolaha dhirta ah, loona beddelo gulukoos.